मलेसियाको गाँठो कहिले फुक्ने हो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मलेसियाको गाँठो कहिले फुक्ने हो ?
असार १० गते, २०७६ - ०६:५६
विज्ञ भन्छन्– चाबी मन्त्रीसँग छ, जहिले चाह्यो तहिले खुल्छ
काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो। तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ?विज्ञहरूको निचोड छ, ‘ श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ।’
आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे। तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको।
मलेसियाका भेन्डरविरुद्ध लडिरहेका मन्त्री विष्टकै सहमतिमा परराष्ट्रले हालै कतारका लागि भने एकमात्र कम्पनी ‘कतार भिसा सेन्टर’ लाई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएको छ। खाडीका देशका लागि गाम्काका १२ संस्थाको वर्षौंको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार मौन छ। ‘यसले मन्त्रीको चाहना समाधान वा कामदारको हितभन्दा पनि आफ्नो जित रहेको प्रस्ट्याउँछ’, ती अधिकारीले भने, ‘कि दह्रो कुरा गरेर टुंग्याउँ कि छाडिदिऊँ भनेर हामी भन्छौं, उहाँ मान्नुहुन्न। सिन्डिकेटको मनैदेखि विरोध गरेको भए सबै देशमा एउटै नीति लिनुपर्ने होइन र र? ’
आईएलओको शतवार्षिकीका अवसरमा हालै स्विजरल्यान्डमा नेपाल र मलेसिया सरकारका प्रतिनिधिबीच पनि गतिरोधबारे छलफल भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनसँग शिष्टाचार भेट गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने टुंग्गो लगाएका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्राविधिक कमिटीको बैठकका लागि मिति र स्थान छिट्टै टुंग्गो लाग्ने बताए। घिमिरेले श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी रहेका प्रक्रियागत विषयलाई छिट्टै टुंगाउने गरी छलफल केन्द्रित भएको बताए। सम्झौता भएकै दिन प्राविधिक कमिटीको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि बस्न सकेको छैन।
करिब तीन महिनाअघि राजदूतको कार्यभार सम्हालेका उदयराज पाण्डे मलेसिया गएर कूटनीतिक पहल सुरु गरेका थिए। त्यसबाहेक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुई देशबीच औपचारिक कुराकानीसमेत हुन सकेको थिएन।
यसबीच सरकारले थप स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ। मलेसियाले भने पुराना ३७ वटाबाट नघटाउने÷नथप्ने अडान छाडेको छैन। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव उमेश ढुंगानाले ती संस्था छनोटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
उता मलेसियाले एक वर्षदेखि विदेशी श्रमिक कटौती गरी आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। एक वर्षदेखि नेपालसहित बंगलादेशबाट कामदार गएका छैनन्। एक वर्ष अवधिमा अन्य देशबाट मलेसियामा एक लाख श्रमिक गएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेलले भने मलेसिया रोजगार छिट्टै खुल्ने संकेत देखिएको बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। देश भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाबाटै आउँछ। बन्द हुनुअघि नेपाली कामदारको मलेसिया पहिलो रोजाइमा पथ्र्यो। मासिक १० हजारभन्दा बढी त्यहाँ जान्थे।
असार १० गते, २०७६ - ०६:५६ मा प्रकाशित